अब ८.८ रेक्टरको भूकम्प आए पनि सिंहदरबार नभत्किने ! - Everest Dainik - News from Nepal
अब ८.८ रेक्टरको भूकम्प आए पनि सिंहदरबार नभत्किने !
काठमाडौं, चैत २० । सरकारले गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर २०७२ को भूकम्पबाट क्षति पुगेको सिंहदरबारको मुख्य भवनलाई ८ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पबाट समेत क्षति नपुग्नेगरी पुनर्निर्माण थालेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पले चर्काएको सिंहदरबारको मुख्य भवनको पश्चिमी मोहडालाई सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
प्राधिकरणले यसअघि सिंहरदबारको मुख्य भवनको पश्चिम मोहडाको भागलाई पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरे पनि पुनः सबलीकरण गर्ने निर्णयमा पुगेको हो । प्राधिकरणले सबलीकरणकै आधारमा ८ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्प आउँदा पनि केही नहुने गरी डिजाइन तयार भएको जनाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।